Intlanzi - iBezzia | IBezzia
Pescado Konke kukutya okuqulathe iintlanzi, okuvela kwiilwandlekazi, iilwandle, imilambo kunye namachibi. Iiresiphi zoku kutya zininzi kwaye ukongeza ekuqhubekeni ngeendlela ezahlukeneyo zokucacisa, zahlulwe kukuhamba kwazo kunye neesosi ezahlukeneyo abanokuziphatha.
Ngokubhekisele kuluncedo loku kutya, zonke iintlobo zityebile kwiiproteni kunye neeminerali. Ukongeza, iintlanzi zamanzi anetyuwa (ezibanjiswa elwandle) zihlala zityebile kakhulu kwii-acid ezinamafutha, ngakumbi ii-acid ezingafunyiswanga, i-omega 3 kunye neeminerali ezinje nge-iodine, zinc, phosphorus, selenium.
Siyakukhuthaza ukuba ufumane icandelo lethu elinikezelwe iintlanzi zokupheka.
Isitayile seHake Sephardic
I-Sephardic cuisine yinxalenye yenkcubeko yethu yokupheka. Kule cuisine izuzwe njengefa eSephardim, amaYuda awaye ...
Iifake ze-Hake kwi-cream ye-zucchini
Kukho izitya ezinje ngezi zinqatha zehake kwikrimu ye-zucchini ekulula kakhulu ukuzilungisa kwaye ziphumelele ...
Zonke i pebre de hake
Sithanda ukupheka isitshixo sendabuko eBezzia kwaye senze ezethu iinguqulelo ukuze sizilungelelanise ...
I-salmon ye-Skillet ene-lemon kunye ne-rosemary
Ukuba ufuna isitya esilula kunye nesalmon njenge-protagonist, qaphela! Ukulungiselela le salmon iphekiweyo nge ...
Hake kwi-almond sauce
por UMaria vazquez yenzayo Iinyanga ze9 .
Ukukhangela iresiphi yentlanzi ekhawulezayo nelula? Le hake kwisosi yom-amangile esiyicebisayo namhlanje iyahambelana ...
Ichickpea stew kunye ne-hake kunye nekholifulawa
Namhlanje silungiselela enye yezitya esizithandayo eBezzia. Isitya esipheleleyo nesithuthuzelayo esityeni ...
Iquinoa, isalmon, iapile kunye nesaladi yetumato
Iquinoa ibe kukutya ngobukho obukhulu etafileni yethu. Iminyaka emi-5 eyadlulayo yayithelekiswa ...
Iitapile ezaphukileyo ngekhowudi
Iitapile ezicoliweyo endikucebisa ngazo namhlanje ziluncedo olukhulu njengokuhombisa, kodwa zinokuguqulwa ngokwazo ...
Ngaba ujonge ihambhega eyahlukileyo ukonwabele nabahlobo nakuphi na ubusuku basehlotyeni? I-salmon burger esiyicebisayo namhlanje ...